Books/Documents about Arakan – Kyaw Zaw Oo's Blog
Books/Documents about Arakan
အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ/ရခိုင်ဘာသာတို့ဖြင့် ရေးသားထားသည့် ရခိုင်အကြောင်းစာအုပ်များ
(1) A Burmese Wonderland (by Major C. M. Enriques)
(2) A Marriage in Burmah (by Mrs. M. Chan-Toon)
(3) A Study of Buddhism in Arakan (by Ashon Nyanuttara)
(4) Arakan and the First Anglo-Burmese War, 1824-25 ( by B. R. Pearn)
(5) Arakan Eighty Years Ago (by J. Stuart)
(6) ARAKAN, MIN YAZAGYI, AND THE PORTUGUESE: the relationship between the growth of Arakanese imperial power and Portuguese mercenaries on the fringe of mainland Southeast Asia 1517-1617 (as submitted in 1993) (by Michael W. Charney)
(7) Behind The Mask [by Khin Maung Saw (Berlin)]
(8) BURMA’S LOST KINGDOMS: Splendours of Arakan (by Pamela Gutman)
(9) India beyond the Ganges: Defining Arakanese Buddhism in Persianate colonial Bengal (by Thibaut d’Hubert)
(10) Consonant Correspondences of Burmese, Rakhine and Marma with Initial Implications for Historical Relationships (by Heidi A. Davis)
(11) Fighting Through to Kohima: A Memoir of War in India and Burma (by Michael Lowry)
(12) King Bering (ခေါ်) ဗိုလ်ချင်းပျံ ( by B. R. Pearn)
(13) Ma Pyu – An Arakanese Love Story (by an Arakanese)
(14) A Reinvestigation of Konbaung-era Burman Historiography on the Beginnings of the Relationship Between Arakan and Ava (Upper Burma) (by Michael Walter Charney)
(15) The Arakan State (by U Kyaw Min)
(16) The Buddhist Art of Ancient Arakan ( by San Tha Aung)
(17) The Development ofaMuslim Enclave in Arakan ( by Aye Chan)
(18) The Hill Tracks of Arakan 1881 (by Major Gwynne Hughes)
(19) The Land of great Image (by Maurice Collis)
(20) The Maharani of Arakan ( by Sir Rabindranath Tagore)
(21) The Mujahid Revolt in Arakan_British Foreign Office (by Research Department, British Foreign Office)
(22) The Rakkhanga-Sannas-Curnikava and the Date of the arrival of Arakanese Monks in Ceylon
(23) The Story of Mahamuni ( by U San Shwe Bu)
(24) ကျွန်းရွာဓလေ့ ကဗျာများ
(25) ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဖြစ်စဉ်သမိုင်း
(26) ကိုယ်တွိ ရခိုင်ပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲ မှတ်တမ်း ( by ဒေးဝန်းအောင်ကျော်ရွှီ)
(27) ကိုယ်တွေ့ မေယုမြေ (by ဦးစံထွန်းအောင်)
(28) ကိုလိုနီဘဝ ရွှေပြည်ရခိုင် ( by မြထွန်းအောင်)
(29) ဂန္တဝင် ရခိုင်ဝေါဟာရ (၂၁၀၀) (by ဦးထွန်းအောင်ကျော်)
(30) ဂုဏ်ယူပါသည် ဓညဝတီ [by သီဟနန္ဒ(ကစ္ဆပနဒီ)]
(31) ဂုတ္တိလ နှင့် မုသိက သာခြင်းသစ် (by ဆရာဦးအောင်ထွန်း)
(32) စိတ်ကူးခြောက်ပိဿာ နန့် မြောက်ဦးကဘီလူး ( by မြောက်ဦးကဘီလူး)
(33) ဇာလုပ်ကတ်ဖို့လေး (by ဆရာစံကျော်ထွန်း)
(34) ရခိုင်သာခြင်းများ ( by တန်းခိုးဆရာထွန်း)
(35) တော်လှန်ရေးခရီးဝယ်၊ အတွဲ (၁) (by ဘုံဘောက်သာကျော်)
(36) တော်လှန်ရေးခရီးဝယ်၊ အတွဲ (၂) (by ဘုံဘောက်သာကျော်)
(37) ဓညဝတီမြို့၏ နိဂုမ်းရွာများသမိုင်း လင်္ကာ (by ကျောက်ရစ်ကေဆရာ ဦးမောင်စံလှ)
(38) ဓညဝတီရာဇဝင်သစ် (by ဦးပဏ္ဍိ)
(39) နတ်မြစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၉၉
(40) နတ်သမီးသိုက် ရခိုင်ရာဇဝင်
(41) ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံခြားသား ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ ခိုးဝင်လွှမ်းမိုးမှု အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ပြချက် (by ဦးထွန်းမြဦး) | ရင်းမြစ်_ Morn RaZaGree: မင်းရာဇာကြီး စာကြည့်တိုက် |
(42) ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဖြစ်စဉ်သမိုင်း
(43) မင်းပြားတခွင် ကျိန်းတော်ရှင် (by အရှင်စက္ကိန္ဒ နှင့် အရှင်ဝါသဝ)
(44) မင်းပြားမြို့နယ် ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း
(45) မင်းပြားဝန်းကျင် သုတေသနအမြင် [by အောင်သူရကျော်(ရက္ခိုင်)]
(47) မြတ်ပန်းသဇင် မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ်(၃)၊ ၂၀၁၅ ဇူလိုင်
(48) မြေဆီမည်းမည်း သွေးရဲရဲ (by ဖိုးကျော့)
(49) မြောက်ဦးခေတ်နှောင်း ရခိုင်ရာဇဝင် (အေဒီ ၁၆၃၈-၁၇၈၄) (by ကျော်ဝင်းဦး)
(50) မြောက်ဦးခေတ်အစောပိုင်း ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံရေး (by အေးချမ်း)
(51) မြောက်ဦးစစ်တမ်း (by မောင်မောင်စိုး)
(52) မြောက်ဦးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများစုစည်းမှု
(53) မြောက်ဦးမြို့တော် (by ထွန်းရွှေခိုင်)
(54) မြောက်ဦးမြို့နယ် ဖြစ်စဉ်သမိုင်း (by မှတ်တမ်းပြုစုရေးကော်မတီ၊ လမ်းစဉ်ပါတီ မြောက်ဦးမြို့နယ်)
(55) မောင်ကံထူး မှတ်စု
(56) ရက္ခမဏ္ဍိုင်ဆောင်းပါးများ၊ အမှတ်(၁) (by ဦးဘစံ)
(57) ရခိုင် ဗျာလ် [by တက်ထွန်းနီ(မြောက်ဦး)]
(58) ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းလုံခြုံရေး နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အကြံပြုတင်ပြချက် စာတမ်း (by စာတမ်းပြုစုရေးကော်မတီ)
(59) ရခိုင်ကဗျာစစ်တမ်း (by နတ်မြစ်-လှိုင်းပြာ)
(60) ရခိုင်ကဗျာနန့် ရခိုင်အတွေးအခေါ် (by စံကျော်ထွန်း)
(61) ရခိုင်စတူပါကျောက်စေတီငယ်များ (by မင်းပြားမင်းသိန်းဇံ)
(62) ရခိုင်စာဆိုတော်များ (by ထွန်းရွှေခိုင်)
(63) ရခိုင်စာပေ ခရီးလမ်းကြောင်း ( by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(64) ရခိုင်စာပေခရီး [By အရှင်ကောသလ္လ(ဂဝေသီ)]
(65) ရခိုင်စာအရီးအသား နှင့် ပြဿနာများ ( by မောင်ဗသိန်း)
(66) ရခိုင်ညွန့်ဖူး ယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးများ အမှတ် (၁+၂)
(67) ရခိုင်ညွန့်ဖူး ယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးများ အမှတ် (၃)
(68) ရခိုင်ညွန့်ဖူး ယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးများ အမှတ် (၄)
(69) ရခိုင်ညွန့်ဖူး ယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးများ အမှတ် (၅)
(70) ရခိုင်ညွန့်ဖူး ယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးများ အမှတ် (၆)
(71) ရခိုင်တံခွန် ပုံပြင်များ ( by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(72) ရခိုင်တန်ဆောင် ဆောင်းပါးများ (by ဦးဦးသာထွန်း)
(73) မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဂျပန်များဝင်လာခြင်း နှင့် ရခိုင်ဒေသ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး (by ခင်မြတ်သွယ်)
(74) ရခိုင်နိဒါန်း (by မောင်ပြူး-သံတွဲ)
(75) ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်များကို သမိုင်းရှုထောင့်မှ လေ့လာချက် ( by ကျော်ဇံသာ)
(76) ရခိုင်ပြည်အတွင်းသို့ မူဆလင်များ ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု အဆင့်ဆင့် (by မြင့်သိန်း)
(77) ရခိုင်ပုံသေဝတ္တုများ (by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(78) ရခိုင်ဘာသာစကားလမ်းညွှန် (by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(79) ရခိုင်မင်းသမီး ဧချင်း (by အဒူမင်းညို)
(80) ရခိုင်မင်းသား (by ဦးစန်းမောင်)
(81) ရခိုင်မဟာမုနိ၏ မဟာကျန်မုနိငါးဆူ [by သူမြတ်(မဟာအောင်မြေ)]
(82) ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုများ၊ အမှတ် (၂) (by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(83) ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုများ၊ အမှတ်(၄) (by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(84) ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုများ၊ အမှတ် (၆) (by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(85) ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုများ၊ အမှတ် (၇) (by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(86) ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုများ၊ အမှတ် (၈) (by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(87) ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုများ၊ အမှတ် (၉) (by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(88) ရခိုင်ရှေးဟောင်းမြို့တော်များ (by ထွန်းရွှေခိုင်)
(89) ရခိုင်ရာဇဝင်ကြီး ( by ဦးထွန်းရွှေ)
(90) ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း၊ ဒုတိယတွဲ (by ရမ်းဗြဲတောင်ကျောင်းဆရာတော်)
(91) ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း၊ ပထမတွဲ ( by ရမ်းဗြဲတောင်ကျောင်းဆရာတော်)
(92) ရခိုင်ရိုးရာဝတ္တု (by မင်းပြား မင်းသိန်းဇံ)
(93) ရခိုင်လျှောက်ထုံးများ (by နန္ဒာထွန်း)
(94) ရခိုင်သဘာဝ တေးကဗျာများ (by အရှင်စက္ကိန္ဒ)
(95) ရခိုင်သမိုင်း ယဉ်ကျေးမှု သုတေသနဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် (၂) [by ရွှေခိုင်ကျော် (မြောက်ဦး)]
(96) ရခိုင်သမိုင်း အလင်းပြကျမ်း (by ဦးရွှေဇံ)
(98) ရခိုင်အာဇာနည် သျှင်မြဝါ အတ္ထုပတ္တိ (by ဦးကျော်ကျော်လှ)
(99) ရတနာရွှေမြေ (ဦးလှဒင် ဘာသာပြန်)
(100) ရန်ကုန်ချီ ဒေးဝန်းကြီးမှတ်တမ်း (by ဒေးဝန်းအောင်ကျော်ရွှီ)
(101) ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရခိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ (by ဉာဏိဿရ)
(102) ရွှေဓါတ်ငွေ့ကို အသုံးပြု၍ ရခိုင်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်သူသို့ တင်ပြခြင်း (by ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ)
(103) ရိုးမခေါ်သံ (by မောင်စံဖော်)
(104) ဝေသာလီခေတ်အမျိုးသမီး ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု ပန်းပုရုပ်ထုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာတမ်း (by မငြိမ်းသူဇင်)
(105) သျှင်သာရခိုင်ဆောင်းပါးများ အမှတ်(၁)
(106) သျှင်သာရခိုင်ဆောင်းပါးများ၊ အမှတ်(၂)
(107) သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးအတွင်းရှိ ရုပ်လုံးရုပ်ကြွများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို လေ့လာချက် (by မဇင်ဝေဝေ)
(108) သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်
(109) သူ့ကျွန်မခံ ဇာတိမာန်ဖြင့် (by မနုဿ ဦးဘစိန်)
(110) သူ့ကျွန်မခံ ဗိုလ်ချင်းပျံ၏ တော်လှန်ရေးခရီး (ဘာသာပြန်- မောင်ဦးရှင် နှင့် အောင်ကျော်သိန်း)
(112) အလောင်းတော် အရိန္ဒမာ လင်္ကာသစ် (by ဆရာဦးသာအောင်)
(113) အသျှင်ဉာဏိဿရ အမေး၊ ဦးဦးသာထွန်း အဖြေ
(114) ဥဒိန္နရတုကဗျာ (by တန်းခိုး ဆရာထွန်း)
(115) ဥပမာစုံ ရခိုင်စကားပုံ ( by အရှင်စက္ကိန္ဒ နှင့် အရှင်ဝါသဝ)
(116) ဦးကျော်ရင်၏ သျှင်သာရခိုင်ဆောင်းပါးများ (by ကထိက ဦးကျော်ရင်)
(117) ဦးရာဇ်မြေမဂ္ဂဇင်း (၂-၁၀) လက်ရွေးစင်ဆောင်းပါးများ
(118) ရခိုင်ရာဇဝင် (by ဦးအောင်သာဦး)
(119) Arakan, Past – Present – Future:arésumé of two campaigns for its development (by John Ogilvy Hay)
(120) ရခိုင်ရိုးမမှာ ဘဝတစ်ကွေ့ (by မြကြာဖြူ)
(121) New evidence reveals ARSA massacred scores in Rakhine State (by Amnesty International)
(122) Field Notes on the Birds of Coastal Arakan and the Foothills of the Yomas (by Sir Philip Christison and others)
(123) ရခိုင်တို့၏ ပဥ္စမသံဃာယနာတင်သမိုင်း [by ဒွါရာဝတီ- အသျှင်ကုသလ (ငွေသဇင်)]
(124) A New Dimension of Violence in Rakhine State_ ICG report (by International Crisis Group)
(125) ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အကြမ်းဖက်မှု အနေအထားအသစ်_ ICG report (by International Crisis Group)
(126) From Elections to Ceasefire in Rakhine State_ ICG report (by International Crisis Group)
(127) An Avoidable War_ Politics and Armed Conflict in Myanmar’s Rakhine State_ ICG report (by International Crisis Group)
(128) ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ (by ဗမာ့ခေတ် ဦးဘရင်)
(129) နိုင်ငံခြားသားများဝင်ရောက်မှု နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဖြစ်ရပ်အခြေအနေအချို့ (by ဗိုလ်မှူးလှမြိုင်) | ရင်းမြစ်_ Morn RaZaGree: မင်းရာဇာကြီး စာကြည့်တိုက် |
(130) Arakan,aNeglected Land and Her Voiceless People [by Khin Maung Saw (Berlin)]
(131) ရခိုင်ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ (ပထမတွဲ)
(132) ရခိုင်သမိုင်းမိတ်ဆက် (by ဒေါက်တာအေးချမ်း)
(133) Territorial Dispossession and Persecution in North Arakan (Rakhine), 1942–43 (by Jacques P. Leider)
(134) Northern Arakan District Gazetteer Vol A (by G. E. R. Grant Brown)
(135) ရခိုင်စာပီမဂ္ဂဇိင်း၊ အမှတ်(၁)
(136) ဟင်္သာစီမံချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သို့ တင်ပြချက် (by ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီ) | ရင်းမြစ်_ Morn RaZaGree: မင်းရာဇာကြီး စာကြည့်တိုက် |
(137) Re-examining Ethnic Identity In Myanmar (by Sarah L Clarke and others)
(138) မြန်မာမှုပြုမရသော ရခိုင်ကာရံများ (by ရခိုင်ပေါင်းကူး သာလှဦး)
(139) The Religious Landscape in Myanmar’s Rakhine State (by Melyn McKay)
(141) ရခိုင်အမျိုးသမီးသူရဲကောင်း အတ္ထုပတ္တိ (by ဦးမောင်ထွန်းအောင်)
(142) အေဒီခြောက်ရာစုနှင့် ယင်းမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်သုံးအက္ခရာ (by ဦးစံသာအောင်)
(143) The Arakanese Calendar (1820-1918) (by Htoon-Chan) | ရင်းမြစ်_ ရက္ခိုင်မှတ်တမ်းများ FB page | post |
(145) ရခိုင်ပြည်ရွှေရောင်လွှမ်းချိန် (by Jacques Leider | ဘာသာပြန်- ဒေါက်တာကျော်မင်းထင်)
(146) ရခိုင်သမိုင်းထဲက ဘဝသင်ခန်းစာများ (by မင်းပြား မင်းသိန်းဇံ)
(147) ရခိုင်သုတအဘိဓာန် (by ဦးအောင်လှသိန်း)
(148) သံတွဲသမိုင်း (သို့မဟုတ်) ရခိုင်တို့၏ ဒွါရာဝတီကျမ်း [by ဒွါရာဝတီ- အသျှင်ကုသလ (ငွေသဇင်)]
(149) မဇ္ဈိမဒေသ အရေးတော်ပုံကျမ်း (by ဦးလှထွန်းဖြူ)
(150) Mass Departures in the Rakhine-Bangladesh Borderlands (by Jacques P. Leider)
(151) History of Burma: Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenassarim and Arakan (by Sir Arthur Phayre)
(152) Burma Gazeteer_ Akyab District Volume A (by R. B. Smart)
(153) ရခိုင်ဆေးသဒ္ဒါကျမ်း (by ဦးအောင်ချစ်)
(154) မဟာပညာကျော်လျှောက်ထုံး (by ဆရာကြီးလင်း)
(155) မဟာမုနိ သမိုင်းဟောင်း (by ပွဲစားကိုမြတ်ထွန်း)
(156) ရခိုင်ပြည် ပရိယတ္တိဆရာတော်များ၏ စာတမ်း (၃၆)စောင်၊ ၂၀၁၈
(157) research papers on Old Arakan (by U San Shwe Bu)
(158) ရက္ခဝံလက် ရခိုင်အမျိုးသားမဂ္ဂဇိန်း၊ အမှတ်(၃)
(159) Burma’s Resource Curse (by Arakan Oil Watch) | March 2012
(160) Danger Zone (by Arakan Oil Watch) | December 2012
(161) ရခိုင်အမျိုးသားနိ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ (by ရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ) | ရခိုင်ဘာသာပြန်- ဦးအာရကံ
(162) Three Burmese Dialects (by John Okell)
(163) မြန်မာ့သယံဇာတကျိန်စာ (by Arakan Oil Watch) | March 2012
(164) ကမန်မျိုးနွယ်စုသမိုင်း (by မောင်ဆန္ဒ-လယ်ဝေး)
(165) မြောက်ဦးမြို့ဘုရားသမိုင်း (by ဦးဦးသာထွန်း)
(166) ရခိုင်ကျောက်စာပေါင်းချုပ် (by ဦးဦးသာထွန်း နှင့် ဦးကျော်ထွန်းအောင်)
(167) အန္တရာယ်ဇုံ (by Arakan Oil Watch) | December 2012
(168) “Mughal Warfare”: Indian frontiers and high roads to empire, (1500-1700) | (by Jos Gommans)
(169) “နိုင်ငံ၊ လူမျိုးနှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာကို စောင့်ရှောက်သော ဥပဒေ“ (by ကျော်ဇောဦး)
(170) “ရခိုင်သမိုင်းကြေးမုံ“ [by ခိုင်ဖွား (ပြောင်းဆိပ်)]
(171) “ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ် ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံရေး နှင့် မျက်မှောက်ခေတ် ဘူးသီးတောင် မောင်တော အခြေအနေ“ (by ဆရာခိုင်မျိုးစောင့်)
(172) “The Muslims of Burma“ (by Moshe Yegar)
(173) “ဘင်္ဂါလီလူအုပ်စုလက်ချက်ဖြင့် ဟိန္ဒူ ကိုးဆယ်ကျော် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အသတ်ခံရမှု ဆိုင်ရာ တင်ပြချက် (By – ဦးကျော်ဇောဦး)”
(174) “မြန်မာ-တရုတ် ဆက်ဆံရေး နှင့် မြန်မာ့အရေး” (by မောင်မောင်စိုး)
(175) “AA အပစ်ရပ်ခြင်း” (by မောင်မောင်စိုး)
(176) “တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ” (by မောင်မောင်စိုး)
(177) “The Marma from Bangladesh: A ‘de-Arakanized’ Community in Chittagong Hill Tracts” (by Kyaw Minn Htin)
(178) “Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier” (by Martin Smith)
(179) “The Religious Landscape in Myanmar’s Rakhine State” (by Melyn McKay)
(180) “The Arakan Army in Myanmar: Deadly Conflict Rises in Rakhine State” (by David Scott Mathieson)
(181) “The Eastern Frontier of British India, 1784–1826” (by A. C. Banerjee)
(182) “ဓညဝတီရခိုင်ပြည်ကြီး ၏ အထုပ္ပတ္ထိစာတမ်း” (by မောင်ဘိုးကျိုင်)
(183) “ရခိုင်ဝေါဟာရအဘိဓာန်ကျမ်း” (by သုတေသီ နတ်မြစ် အသျှင်ဝါသဝ)
(This page was last updated on 20th December 2021.)
Short Link to This Page => https://wp.me/PaGp9p-Bf
The blog posts hereby may contain links to third-party web-sites or services that are not owned or controlled by this Blog. The blog has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party web-sites or services.
By using the links hereby on your part, it must be assumed you agree that this blog or blog owner shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss, caused or alleged to be caused by or in connection with use or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web-sites or services. We strongly advise you to read this disclaimer before you use the links provided hereby.